Taliyihii u horeeyay ee Ciidanka Booliska Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday Mareykanka – Bosaso Times News
Taliyihii u horeeyay ee Ciidanka Booliska Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday Mareykanka
admin October 26, 2017 Taliyihii u horeeyay ee Ciidanka Booliska Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday Mareykanka2017-10-26T07:34:13+00:00 Puntland, somali News No Comment
Allaha u naxariistee Taliyihii u horeeyay ee Ciidamada Booliska Soomaaliya Jen. Maxamed Abshir Muuse ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Gen. Maxamed Abshir ayaa horay uga soo qeyb qaatay dhismihii ciidamada Soomaaliya iyo halgankii xornimada doonka, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii u horeeyay ee ciidanka qalabka sida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tacsi u diray eheladii, qaraabadii iyo umaddii Soomaaliyeed uu ka geeriyooday.
Madaxweyne Farmaajo ayaa marxuumka ku sifeeyay inuu ahaa shaqsi karti, dhowrsanaan, daacadnimo iyo dal jaceyl ku sifoobay, isla markaana uu kaalin ka qaaday dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed muddo 10 sano oo uu hoggaaminayay.
Allaha u naxariistee Maxamed Abshir wuxuu 1926-dii ku dhashay Xarardheere, 1943-dii ayuu ku biiray ciidamo Ingiriisku dhisay, 1958-60 wuxuu noqday Taliyaha ciidamada difaaca Soomaaliya, isagoo noqday sarkaalkii ugu horeeyay ee qaata darajada Janaraal oo weliba ku qaata da’da ugu yar 32 sano jir.
1960-1969 kii wuxuu ahaa Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed isagoo noqday Taliyihii ugu horeeyey, waxaa shaqada laga joojay markii Alla Ha’unaxariistee ay Madaxweyne Sharmaake isku khilaafeen qaabkii Doorashada, Febraayo 1969 ayuu xilkaasi iska casilay.
1969 waxaa xirtay Dowladdii Alla ha’unaxariistee Maxamed Siyaad Bare waxaa lasii daayey sanadkii 1982, wuxuu ka mid noqday saxiixayaashii Manifesto. Kadibna wuxuu muddo joogay deegaanada Puntland oo lagu xasuusto inuu ka shaqeyn jiray nabadda iyo ilaalinta nidaamka. Wuxuu sanadihii danbe ku noolaa Dalka maraykanka halkaas oo uu ku geeriyooday.
http://www.bosasotimes.com/taliyihii-u-horeeyay-ee-ciidanka-booliska-soomaaliya-oo-xalay-ku-geeriyooday-mareykanka/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Gen.Mohamed-Abshir2.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Gen.Mohamed-Abshir2-150x150.jpg 2017-10-26T07:34:13+00:00 adminPuntlandsomali NewsGen.. Mohamed Abshir,Puntland,Somali PoliceAllaha u naxariistee Taliyihii u horeeyay ee Ciidamada Booliska Soomaaliya Jen. Maxamed Abshir Muuse ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Gen. Maxamed Abshir ayaa horay uga soo qeyb qaatay dhismihii ciidamada Soomaaliya iyo halgankii xornimada doonka, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii u horeeyay ee ciidanka qalabka...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Gen.. Mohamed Abshir, Puntland, Somali Police
« Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib uga soo laabtay, kana warbixiyay safarkii dalalka deriska
Muran weli ka taagan Dekedda Boosaaso iyo lacago la sheegay in lagu soo rogay »